Izindaba - Amathiphu okushefa kwabesifazane
Amathiphu okushefa kwabesifazane
Lapho ushefa imilenze, izikhwama zangaphansi noma indawo yebhayisikili, ukuthambisa kahle umzimba kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile. Ungalokothi uphuce ngaphandle kokuqala ukuswakama izinwele ezomile ngamanzi, ngoba izinwele ezomile kunzima ukuzisika nokuhlephula umphetho omuhle wensingo. I-blade ebukhali ibalulekile ekutholeni ukushefa okusondele, okunethezekile, okungacasuli. Insingo eklwebayo noma edonsayo idinga insingo entsha ngokushesha.
Isikhumba se-1.Misten ngamanzi cishe imizuzu emithathu, bese ufaka i-gel yokushefa ewugqinsi. Amanzi agxisha izinwele, okwenza kube lula ukusika, futhi ijeli yokucheba isiza ukugcina umswakama.
2.Sebenzisa imivimbo emide, ngaphandle kokufaka ingcindezi eyeqile. Shefa ngokucophelela ezindaweni ezinamathambo ezinjengamaqakala, imicu kanye namadolo.
3.Amadolo, goba kancane ukudonsa isikhumba siqine ngaphambi kokushefa, njengoba isikhumba esisongiwe kunzima ukushefa.
4.Hlala ufudumele ukuvimbela amaqhuqhuva ehansi, ngoba noma ikuphi ukungahambi kahle esikhunjeni kungabangela ukushefa.
Izindwangu ezisongwe ngezintambo, njengalezo ezenziwe yiSchick® noma iWilkinson Sword, zisiza ukuvimbela ukunganaki nokusikeka okunganaki. Ungacindezeli kakhulu! Mane nje i-blade nesibambo kukwenzele umsebenzi
6.Khumbula ukushefa ohlangothini lokukhula kwezinwele. Thatha isikhathi sakho ugunde kahle ezindaweni ezibucayi. Ukushefa okuseduze, shela ngokucophelela uqhathanisa nokusanhlamvu kokukhula kwezinwele.
Isikhumba 1.Moisten futhi usebenzise ijeli ukushefa obukhulu.
2.Phakamisa ingalo yakho ngenkathi ushefa ukudonsa isikhumba siqine.
3.Shefa usuka ezansi uye phezulu, uvumele insingo ukuba igwebe ngaphezu kwesikhumba.
4.Vimbela ukushefa indawo efanayo izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, ukunciphisa ukucasuka kwesikhumba.
Izindwangu ezisongwe ngezintambo, njengalezo ezenziwe yiSchick® noma iWilkinson Sword, zisiza ukuvimbela ukunganaki nokusikeka okunganaki. Ungacindezeli kakhulu! Mane nje i-blade nesibambo kukwenzele umsebenzi.
6. Gwema ukusebenzisa iziphuzo noma izithako zokuqeda amandla ngokushesha ngemuva kokushefa, ngoba ukwenza kanjalo kungaholela ekucasukeni nasekulunyweni. Ukuvimbela lokhu, shela izikhwama zangaphansi ebusuku bese unika indawo isikhathi sokuzinza ngaphambi kokusebenzisa isiphuzo.
Izinwele ezi-1.Moisten imizuzu emithathu ngamanzi bese ugcoba ijeli lokushefa eliwugqinsi. Lokhu kulungiselela kuyadingeka, njengoba izinwele ezisendaweni ye-bikini zivame ukuba zimbi, zijiyane futhi zilondoloze, okwenza kube nzima ukusika.
2.Phatha isikhumba endaweni ye-bikini ngobumnene, ngoba mncane futhi ithenda.
3.Sheva ngokuvundlile, kusuka ngaphandle kuye ngaphakathi kwethanga nendawo yokububula, usebenzisa imivimbo ebushelelezi.
4.Shefa njalo unyaka wonke ukugcina indawo ingenazinwele ezicasulayo nezingaphakathi.
Imisebenzi yangemva kokugunda: Nikeza isikhumba sakho imizuzu engu-30
Isikhumba sibucayi kakhulu ngemuva nje kokushefa. Ukuvikela ukuvuvukala, vumela isikhumba siphumule okungenani imizuzu engama-30 ngaphambi kwalokhu:
1. Ukufaka ama-lotion, amafutha okuthambisa noma imithi. Uma kufanele uthambise ngokushesha ngemuva kokushefa, khetha ifomula kakhilimu esikhundleni sokugcoba, futhi uvikele ukukhipha amafutha okuthambisa angaqukatha i-alpha hydroxy acids.
2. Ukubhukuda. Isikhumba esisanda kusikwa sisengozini yemiphumela ebulalayo yamanzi e-chlorine nawosawoti, kanye nama-suntan lotions nezikrini zelanga eziqukethe utshwala.